एजेन्सी । शारीरिक कसरतले शरीरको क्यालोरी बर्न गरेर शरीर र मन सन्तुलित राख्ने हामी सबैलाई थाह छ। शारीरिक व्यायाम व्यक्ति आवश्यकताअनुसार हुनुपर्छ। जस्तो कि मुटु स्वस्थ राख्न, कार्डियोभास्कुलर मुभमेन्ट जस्तै दौडने, पौडीखेल्ने गर्नुस्। यी कसरतले स्वस्थ राख्न मद्धत गर्छ, तर के यी कसरत गर्ने क्रममा रोमाञ्चकता वा रमाइलोपना पनि उस्तै हुन्छ? के सेक्स अर्थात् शारीरिक सम्पर्क शारीरिक कसरत जस्तै फाइदाकारी हुन्छ? रोमाञ्चकता तथा रमाइलोपनासँगै यसले शरीर र मनलाई कसरतले झै सकारात्मक प्रभाव पार्नेसक्छ? उत्तर हो, सक्छ।
दशकौंसम्म विभिन्न खोज तथा अनुसन्धानले सेक्सलाई मध्यम खालको कसरत बताउँदै आएको छ।
एउटा जोडीको खास सेक्समा ५ मिनेटदेखि ९ मिनेटसम्म कायम राख्न सक्छ। फोरप्लेसहित यो समय २० मिनेट वा सोभन्दा लामो हुन पनि सक्छ।
यस क्रममा कति क्यारोली बर्न हुन्छ?
सन् २०१३ मा अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताले स्वस्थ जोडीले सेक्स गर्दा खर्च हुने क्यालोरी मापन गरेका थिए। यसबाट थाहा भयो कि एक पटक सेक्स गर्दा शरीरले ८५ क्यालोरी बर्नगर्छ। २०(२५ मिनेट सामान्य गतिमा दौडँदा यति नै शक्ति खर्च हुन्छ। तर पक्का हो कि, दौडँदाको सन्तुष्टी र सेक्सको सन्तुष्टीमा भने धेरै फरक हुन्छ।
सेक्सले तपाईंको पार्टनरलाई नजिक ल्याउँछ र सम्बन्ध सुमधुर बनाउन मद्धत गर्छ। यसले गर्ने फाइदा यतिमा मात्र सिमित छैन, कार्डियोभास्कुलर रेस्पोस्ट सुधारेर मुटुलाइ फाइदा गर्छ। ब्लडप्रेसर कम गर्छ। अनि रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउँछ।
शारीरिक मात्र होइन यसको मानसिक फाइदा पनि उतिनै छ। सेक्सको क्रममा सेरोटोनिन, डोपामिन, नोरेपिनेफ्रिने र अक्सिटोसिन जस्ता न्युरोट्रान्समिटरहरुको उत्पादनले मानसिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ।
सेक्स घरभित्र गर्ने कसरतः
सेक्सलाई सबैभन्दा सजिलो घरभित्रै गर्न सकिने कसरत भन्न सकिन्छ। चाहे जस्तो मौसमहोस् फरक पर्दैन। धेरै अनुसन्धानले देखाउँछ कि जिम गएर क्यालोरी बर्न गर्नुभन्दा सेक्स रोज्ने महिला तथा पुरुष अत्याधिक छन्।
सेक्स अवधी बढाउनेः
सेक्सको बेफाइदा भनेको कसरत झै यो लामो समय टिकाउन सकिँदैन भन्ने धेरैको चिन्ता रहेको पाइन्छ। तर फोरप्लेको समय बढाएर यसको अवधि बढाउन सकिन्छ जसले धेरै क्यालोरी बर्न गर्न सकिन्छ। तर, यसोभन्दैमा शारीरिक कसरतलाई सेक्सले रिप्लेस भने गर्न मिल्दैन।
पुरुषको शरीरले वीर्य उत्पादन गर्न सोचेभन्दा बढी शक्ति खर्चगर्छ। अत्याधिक वीर्य निस्कासन गर्नु अर्थात् अधिक सेक्स गर्नु भनेको शरीरलाइ बढीभन्दा बढी भार पार्नु हो। यदि राम्रो खानपिन छैन र निस्कासन भएको वीर्य उत्पादन गर्न शरीरसँग आवश्यक बल हुँदैन भने यसले थुप्रै शारीरिक र मानसिक समस्या पनि निम्त्याउँछ। त्यसैले यसबारेमा सचेत भएर स्वस्थ अनि सन्तुलिन सेक्स गर्नु राम्रो हुन्छ।